यी स्टार, जसले गर्दैछन् तीव्र प्रतिस्पर्धा – Amareet.com
यी स्टार, जसले गर्दैछन् तीव्र प्रतिस्पर्धा
by amargeet April 29, 2019, 9:37 am 1.9k Views
सदा झै यस बर्ष पनि ६ स्टारहरुले तिब्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । छायाँछवि क्रियशनले आयोजना गर्न लागिएको ११ औं डि सिने अवार्डको लागि ६ स्टार नायकहरुको प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । बर्ष २०७५ को डि सिने अवार्डमा उत्कृष्ट नायक को हुन्ने भन्ने विषयमा ६ जना स्टारहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
जसमा फिल्म क्याप्टेन र ए मेरो हजुर ३ बाट अनमोल केसी, फिल्म लभ स्टेशनबाट प्रदिप खड्का, फिल्म प्रसादबाट विपिन कार्की, फिल्म यात्राबाट सलिनमान बनिया, फिल्म कायराबाट आर्यन सिग्देल र फिल्म रामकहानीबाट आकाश श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । सयको हाराहारिमा रिलिज भएको फिल्महरुबाट चार दर्जन भन्दा बढि फिल्म डि सिने अवार्डमा सहभागी भएका थिए ।
त्यस मध्येबाट ६ जना नायक उत्कृष्टका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिएका हुन् । यस बर्ष अभिनयमा आफुलाई खह्रो रुपमा उतारेका तीन नायक हुन् विपिन कार्की, सलिनमान बनिया र प्रदिप खड्का । यस्तै यो बर्ष अनमोल केसीको स्टारडमले पनि केही हदसम्म काम गरेका छन् । यस्तै आर्यन सिग्देल नेपाली फिल्मका पहिलो चक्लेटी स्टार हुन् । आकाश श्रेष्ठले पनि सक्दो प्रयास गरेका छन् । यसै क्रममा यो बर्ष उत्कृष्टका लागि ६ नायकका फिल्महरु मध्ये ए मेरो हजुर ३ ले सर्वाधिक व्यापार गरेका छन् ।
त्यसपछि यात्राले दोश्रो स्थानमा व्यापार गरेका छन् । यस्तै प्रसाद, क्याप्टेन, लभ स्टेशन, कायरा र रामकहानी छन् । विषयबस्तुको हिसावले यो बर्ष प्रसाद, यात्रा, क्याप्टेन र कायरालाई औसतमा लिन सकिन्छ । अन्य फिल्महरु व्यापारिक हिसाबले चर्चामा आउँछ । यी ६ नायक बाट उत्कृष्ट को होलान् ? त्यो भने केही समयमा थाहा होला । तर यीनै ६ नायकलाई लिएर फलानो उत्कष्ट हुन सक्ने संभावना छ भन्दै दर्शक तथा शुभचिन्तकहरुले अनुमान लगाउँदै आएका छन् ।
फिल्मी फण्डाबाट साभार गरिएको
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाली फिल्मको कथा कसरी कमजोर ?
नेपाली फिल्मको गुणस्तर नसुध्रनुमा लगानीलाई दोष दिने गरिन्थ्यो । जसलाई वलिउड वा हलिउडका फिल्मसँग तुलना गर्दै भनिन्थ्यो फलानो फिल्मले गरेको पब्लिसिटीको खर्च बराबर त एउटा पूरै नेपाली फिल्मको बजेट हुन्छ । तर, बिग बजेटका फिल्महरु पनि बलिउडमा फ्लप भए र थोरै बजेटका फिल्मले बक्स अफिसमा सफल रहेको प्रमाणित गरे ।
बधाई हो, राजी, अन्धाधुन, स्त्री, सन्जु लगायतका बलिउड फिल्महरु सन २०१८ मा सफल रहे । यसबाट ठुलो बजेटबाट मात्र सफल फिल्म निर्माण हुने होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली फिल्मको कमजोरी लाई बाहिरी देशको फिल्मसँग तुलना गर्नेको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । फिल्म सफल हुनुको कारण स्टार वा बजेट मात्र नभएर स्क्रिप्ट प्रमुख रहेको फिल्मकर्मीहरुले बताउदै आएका छन् ।
रजतपटका स्क्रिप्ट लेखनलाई हलुका रुपमा लिइने आरोप वेलावेलामा फिल्मकर्मीले लगाउदै आइरहेका छन् । दशतिरबाट जम्मा पारेको कथामा स्क्रिप्ट लेखेको आरोप पनि बेला बेलामा लाग्ने गर्दछ । राम्रो राइटर नभएर स्टोरी कपि गर्नुपरेको बताउने निर्देशक समेत कलिउडमा भईसके । निर्देशक उज्वल घिमिरेले फिल्म लभस्टेशनको कुरामा यस्तै तर्क गरेका थिए ।
यस्ता निर्देशकहरुले गर्दा पनि नेपाली फिल्म कमजोर बन्दै गईरहेको छ । चोरेको फिल्ममा लभस्टेशनमात्र हैन कोहलपुर एक्सप्रेस, बाबुकान्छा, जय शम्भु, रणवीर, रामकहानी, कायरा लगायत दर्जनौं फिल्महरु छन् । सबै फिल्म पूर्ण चोरी भने हैन । केही अंशहरु चोरेको देखि पूर्ण फिल्म नै चोरेको उदाहरणहरु नेपाली फिल्ममा बर्ष २०७५ मा देखिएका छन् ।
निर्माता कलाकार दीपकराज गिरी नेपाली फिल्म क्षेत्रमा दक्ष स्क्रिप्ट राइटर नभएर फिल्म नचलेको बताउँछन् । दीपक भन्छन्–‘फिल्म राइटरहरुलाई लेखनको कार्यशाला नै राख्नुपर्छ’ । नेपाली फिल्म स्क्रिप्टमा कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । स्क्रिप्ट लेखकलाई लेखनको कार्यशाला राख्नुपर्नेमा सकरात्कम छन् फिल्म लेखक तथा समीक्षक सामिप्यराज तिमील्सिना ।
लेखकलाई ग्रो अप गर्नु राम्रो कुरा रहेको र लेखक सँगसँगै अन्य क्षेत्रका फिल्मकर्मीहरुलाई पनि कार्यशाला राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर फिल्म असफल बन्नुमा लेखक भन्दा निर्देशक बढि जिम्मेवार हुन्छन् । स्क्रिप्ट अनुसार स्टोरी टेलिङ गर्न नसक्नु, भिजुअली क्रियशन नराख्नु निर्देशकका समस्याहरु पनि छन् ।
यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकेको छैन । दशक अगाडी फिल्म लेखरकहरुको एउटा जमात समूहले लेखक संघ स्थापना पनि गरेका थिए । तर त्यो अहिले कहाँ छ, स्वयम लेखरकहरुलाई पनि थाहा छैन । तर, अहिलेका लेखकहरु मिलेर अन्तर्क्रिया पनि गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि देखिएन । निर्माता संघले यस विषयमा चासो दिनुपर्ने हो त्यो पनि भएन ।
बिकास बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष केशव भट्टराईले भने केही समयमै विधागत कार्यशालाहरु संचालन गरिने बताएका छन् । फिल्म नचल्नुको मूख्य कारणमा कथा नै कमजोर भएपनि कम्तीमा कथा, पटकथा तथा संवाद लेखकहरुलाई भेला गरेर कार्यशाला गर्नुपर्ने अन्त्यन्त आवश्यकता देखिएको छ ।
Previous article कुमार सानुको स्वरमा नयाँ नेपाली गीत ” सयौ जुनी संगै ” ( हेर्नुस भिडियो )
Next article चतरा घाटमा ९ दिनपछि रिना बस्नेतको भयाे दाहसंस्कार, आन्दोलनमा आफन्तको असन्तुष्टि (तस्विरहरू सहित)